केदारमान व्यथित | नरेन्द्रराज प्रसाई
जीवनी नरेन्द्रराज प्रसाई June 18, 2011, 2:13 am
व्यथितको जन्म १९७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको बाँसबारीमा भएको थियो । सूर्यमान श्रेष्ठ र पद्मकुमारी श्रेष्ठ उनलाई जन्म दिने बाबुआमा थिए । घरायसी कारणले शिशुकालमा उनको मामली घर स्याङ्जामा उनी पुर्याइएका थिए ।अनि चार वर्षपछि उनी काठमाडौं ल्याइएका थिए ।
राणाका आक्रोशमा व्यथितले वीरबहादुरका नाउँमा निबन्ध लेखे । अनि अर्को साल अर्थात् १९९७ साल कात्तिक २ गते उनलाई राणाले र्सवस्वसहित जेलमा कोचे । कात्तिक ५ गते उनी उपरको घोषणा र्सार्वजनिक भयो "श्री ३ प्रभुको असीम निगाहले देशद्रोही केदारमान व्यथितलाई १८ वर्षो जेल सजाए भएको छ ।"
जेलबाहिर आएपछि व्यथित राणाका विरोधमा झन कुर्लन थाले । राणाको शिरोच्छेदन गर्ने बाटो खोज्दै उनी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा पुगे । अनि त्यस संस्थाको केन्द्रिय सङ्घर्ष समितिको उनी सदस्यमा मनोनीत भए ।
व्यथित भारतमै भए ताका राणा सरकारद्वारा रौतहटस्थित झरोखरको गोलीकाण्डमा उनी फेरि फसाइए । राणा सरकारको अनुरोधमा भारतीय प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । त्यसपछि राणाका करबलमा उनी नेपाल चलान गरिने कार्यवाहीमा परे । तर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री पं.जवहारलाल नेहरुलाई भनसन गरेर उनलाई नेपाल ल्याउनबाट रोके । त्यस बेला उनी १८ महिना भारतको बिहार जेलमा बसेका थिए । अनि प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल सरकारको अनुरोधमा उनी जेल मुक्त भएर नेपाल छिरे ।
व्यथितले राजनीतिलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य ठाने । पछि बी.पी. कोइरालासँग कुरा नमिलेपछि उनले वामपन्थी काङ्ग्रेसको पनि स्थापना गरे । अनि त्यसको पनि उनी आफै सभापतित्व ग्रहण गरे । तर त्यो दल उनीभित्रै सिमित रहेर क्रमशः हराउँदै गयो ।
व्यथित राजनीतिमा जति सक्रिय थिए त्योभन्दा धेरै उनले साहित्यमा काम गरे । त्यसैले उनको राजनीतिक जीवनलाई साहित्यले ओझेल पारिदियो । वास्तवमा उनी नेपाली भाषासाहित्यका गरिमाशाली स्रष्टा थिए । उनको राजनैतिक साहित्यिक व्यक्तित्वलाई कदर गर्दै नइ प्रकाशनले उनलाई राजकविको दर्जा दियो । वास्तवमा उनी नेपाली शैलीका एउटा हिम्मति, कुसल र सबल राजकवि थिए । उनी राजनीतिलाई सौचालय र साहित्यलाई भोजनालय भन्थे ।
व्यथित आफू राजनीति तवरले जहाँ गए पनि आफूसँगै साहित्य पनि लान्थे । उनकै सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली साहित्यक परिषद्को गठन भयो । अनि उनकै अग्रसरतामा त्यसै बेला तीन दिने साहित्य सम्मेलन भएको थियो र त्यस सम्मेलनका सभापति महाकवि देवकोटा थिए । साथै २०१३ सालमा महाकवि देवकोटाको सभापतित्वमा गठित काव्य प्रतिष्ठानमा उनी संस्थापकमध्येका एक थिए । २०१९ सालमा हृषीकेश शाह सभापति र उनी सचिव भएर पनि नेपाली साहित्य संस्थानको स्थापना भएको थियो । अनि दुई वर्षपछि उनी नै यस संस्थाका सभापति भएका थिए ।
व्यथितलाई क्षयरोगले पनि आक्रमण गर्यो । त्यति बेला उनी आर्थिक रुपमा पनि सारै कमजोरी थिए । त्यसैले उनलाई भारतीय राजदूत एवं स्रष्टा भगवान सहायले भोपालको सेनोटोरियम लगेर उपचार गरिदिए । त्यस मुल्काबाट बाँचेपछि सहाय उपर उनले भने ''स्रष्टाले मान्छे बचाउन सक्तो रहेछ र नै म बाँचे ।''
व्यथितले जीवनको उत्तर्रार्धमा अति नै दुक्ख खेपे । त्यस कष्टमा उनी प्रायः हरेक दिन रुन्थे । कुरा के भने- एउटा साहित्यिक समारोहमा भाग लिन नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान पुगेका थिए । त्यसै बेला उनी त्यहाँको सौचालयमा लडे । त्यसै बेला उनको दाहिने खुट्टो भाँच्चियो । त्यही कारणले उनी कहिले काठमाडौंका अस्पतालहरु र कहिले ज्याठाको आफ्नो घरको ओछ्यान परे । धेरै वर्ष थलिएपछि अन्ततः २०५५ साल भदौ २६ गते. उनी महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा स्वर्गीय भए ।